Ikhaya leholide kwi-'Atelier' eDrenthe
Uvimba sinombuki zindwendwe onguHarry & Rosita
Isitudiyo sangaphambili esihonjiswe ngokungcamla
Isitudiyo sihonjiswe kamnandi ngemizobo kunye nezinye izinto zobugcisa. Kukho i-easel enamalaphu, ipeyinti kunye neebrashi ukuze uqalise ngokwakho. Indawo ye-airbnb inegumbi elikhulu elinekhitshi elivulekileyo.
Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo kubandakanya i-dishwasher kunye ne-microwave. Kukho igumbi elinye lokulala elikhulu elinebhedi ephindwe kabini kunye noomatrasi beTempur. Ukuba uyanqweneleka, iibhedi zinokwenziwa ngokwahlukeneyo. Kukwakho nebhedi esongwayo kunye nebhedi yokukhempisha ingasetyenziswa. Ngaphandle kukho i-terrace enkulu yangasese enetafile yepikiniki phambi kwe-cottage kunye ne-sofa yokuphumla ecaleni. Ungasebenzisa kwakhona indawo yokutshisa umlilo apho unokupheka khona. Kukho izinto zokudlala zangaphandle ezinokusetyenziswa. Kukho ujingi, amakhonkco kunye netrampoline enkulu. Ukusuka kwi "Atelier" ujonge kwigadi yeziqhamo. kunye neenkukhu, apho iidonki zethu zombini zihamba khona. Kwigumbi lokuhlala / ekhitshini kukho isitovu se-pellet ukuze sifudumale kakuhle, ehlotyeni kupholile ngokumangalisayo.
Umqolomba wempungutye, ukunkqonkqoza komthi kunye neqela lamaxhama endle. Ukuqhwaba iingwamza kwindlwane, inqaba yeembila, isikhova emthini wendlu yomthi kunye noongqatyana abayi-100 eluthangweni. Konke oku kunokufunyanwa, kubonwe kwaye kuviwe kwindawo ekufutshane. Indlu yethu ikwindlela entle eyahluka-hlukeneyo yokuhamba, ukukhwela ibhayisekile kunye neendlela zebhayisekile zeentaba kwaye ijikelezwe ngamadlelo aneenkomo kunye namasimi ombona.
Umbuki zindwendwe ngu- Harry & Rosita
Wij zijn Harry & Rosita
UHarry & Rosita yi-Superhost